Myat Shu - ဖတ်ညွှန်း
You are here : Myat Shu » Archives for ဖတ်ညွှန်း
Published By Myat Shu On Monday, June 3rd 2013. Under Myat Shu eZine, ဖတ်ညွှန်း
Burma Chronicles ကာတွန်းစာအုပ်ကို ကနေဒါလူမျိုး Guy Delisle က ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ရေးဆွဲပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဇနီးသည် အလုပ်လုပ်တဲ့ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ (Médecins Sans Frontières) ကပေးတဲ့ တာဝန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ရောက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်တာအတွင်း သူ တွေ့ကြုံရတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှပ်တပြက် မြင်ကွင်းအဖုံဖုံကို ကာတွန်းနဲ့ သရုပ်ဖော်သွားတာပါ။ မူရင်းစာအုပ် ပြင်သစ်ဘာသာကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး မြန်မာဘာသာပြန် “ဘားမားခရိုနီကယ်” စာအုပ်ကိုတော့ စာရေးဆရာ မြေမှုန်လွင်ကနေ ပြန်ဆိုပြီး “ငါတို့စာပေ” စာအုပ်တိုက်ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလမှာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, March 11th 2013. Under Myat Shu eZine, ဖတ်ညွှန်း
ရေးသူ - ခင်နှင်းယု စာရေးဆရာမကြီး ခင်နှင်းယု၏ ၀တ္ထုတို ၃၂ ပုဒ်ကို စုစည်း၍ “စပါးစေ့ကလေး” အမည်ဖြင့် ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ် တအုပ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စိတ်ကူးချိုချိုစာပေမှ ထုတ်ဝေလိုက်သည်။ အိပ်မက်ကမ္ဘာ၊ အရှုံး၊ တံလျှပ်၊ တုံ့ကာဝဋ်တင်၊ တရုတ်ဖယောင်းချက်၊ ပေတု၊ သူ့ကြောင့်ခက်တယ်၊ သံသယ-သံသရာ၊ ဒေါ်သဲချာ၊ အိမ်တစ်ခန်း၊ အလိုက်မသိတတ်သူ၊ နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ မလေးစိုက်သော စကာပင်၊ ဘ၀၊ မြေကြီးစော်နံသတဲ့၊ ဝေး၊ စီးပွားရေးပါရဂူ၊ ခေမာစန္ဒီ၊ အုတ်ကြားမြက်၊ တမိုးသောက်လျှင်၊ မနောဝိဥာဉ်၊ ပေးဆပ်ရခြင်း၊ စိန်ကြည်နော်.. စိန်ကြည်၊ ငယ်စာရင်းဖျက်လိုက်ပါတော့ဘုရား၊ မတူလေခြင်း၊ လူ့ပြည်ဆိုသည်မှာ၊ ဓမ္မရက္ခိတ၊ တို့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ၊ ဦးပုံစံနှင့် သမီးလေး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, December 4th 2012. Under ဖတ်ညွှန်း, မျက်ရှု
ရေးသူ - တင်နိုင်တိုး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် စာပေ၊ ပန်းချီ၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ သဘင်အနုပညာရှင် ၄၂ ယောက်အကြား အမှတ်ရစရာများကို ကဏ္ဍငါးခုခွဲ၍ ရေးသားထားသည်။ စာပေကဏ္ဍတွင် ဗိုလ်ချုပ် သုံးတန်းကျောင်းသားဘ၀က ရေးခဲ့ဖူးသော ဇာတ်လမ်းတိုကို ပြန်လည် ဖော်ပြထားရာ ဖတ်ရင်း ပြုံးရပါသည်။ “လိမ္မာသောလူပြော - ဆိုးသောကလေးများသည် ငှက်များကို ပစ်ကြသည်။ အလွန်မှားသည်။ အလွန်ဆိုးသည်။ ဆိုးသောလူပြော - ဘာမှားသလဲကွ၊ ဘာဆိုးသလဲကွ ဟင်။ လိမ္မာသောလူပြော - ငှက်ပစ်တာ ဆိုးတယ်ကွေ့(ကွ)။ ဆိုးသောလူပြော - ဒါဖြင့် မင်းငှက်သား မစားဘူးလား။ လိမ္မာသောလူပြော - စားတယ်။ ဆိုးသောလူပြော - မင်း ငှက်သားမစားချင်ဘူးလား။ လိမ္မာသောလူပြော - စားချင်တယ်။ ဆိုးသောလူပြော - မင်းစားချင်ရဲ့သားနဲ့ ငှက်ပစ်တဲ့လူ မိုက်တယ်၊ ဆိုးတယ်လို့ ... Continue Reading